काँग्रेस कसरी ढल्किदैछ मधेशतिर ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » काँग्रेस कसरी ढल्किदैछ मधेशतिर ?
काँग्रेस कसरी ढल्किदैछ मधेशतिर ?
saharatimes Sunday, December 11, 20160No comments
काठमाडौँ मंसिर २६ गते । कांग्रेस नेतृत्व आन्तरिक असन्तुष्टि भए पनि संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा टसमस भएको छैन । प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई तराईसँग अलग्याउने गरी आएको संशोधन प्रस्तावलाई लिएर त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता एमालेसँगै आन्दोलनमा होमिए पनि नेतृत्वलाई त्यसले छुन सकेको छैन ।
०७० को दोस्रो संविधानसभामा तराई–मधेसका २० जिल्लाको १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले ५२ सिट ल्याएको थियो । दोस्रोमा एमालेले ३६ सिट ल्यायो भने माओवादीले १२ सिट ल्याएको थियो । मधेस केन्द्रित सबै दलको निर्वाचित सिट ११ थियो । कांग्रेस ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसबाट पराजित बन्दा दोस्रो पार्टी भएको थियो । कांग्रेस नेता फरमुल्ला मन्सुर कांग्रेसको आधारस्थल नै मधेस रहेको बताउँछन्, आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ ।